Kolibri Domino Single Pocket Mixed Money Counter - CashCounterMachines.com
musha Kolibri Domino Single Pocket Mixed Money Counter
Mutengo wepakutanga $799.00
Mutengo wanhasi $649.00
-Iyo dhizaini-yakagadzirira mhinduro yekuverenga uye kuronga mari inogadzirwa nebhizinesi rako, iyo Kolibri Domino ™ inova nechokwadi chekuti maverengero emari ako ari echokwadi uku uchivandudza budiriro. Kusiyana nemakaunda emari mazhinji, iyo Domino™ inokwanisa kuverenga mari sezvainopihwa kuburikidza uye nekuzvisarudzira kuti isangano ripi ($1, $2, $5, $10, $20, $50 uye $100 mabhiri). Verenga pasi mabhiri akasanganiswa ane kukosha kwemari kunoratidzwa kuti kukurumidze kuvhara. Ita shuwa kuti rega rega redhinominesheni rauinaro harina chero mabhiri akarasika- hapachashamisi madhora makumi maviri mumadhora mashanu! Uye ronga musanganiswa wedhinominesheni kusvika kumasangano ega ega.
-Domino ™ inoongororawo otomatiki mabhiri ane ultraviolet uye magineti sensors kuona kuti mari yakaunganidzwa ndeyechokwadi. Nepo iyo yepamusoro infrared sisitimu inovimbisa kuti mabhiri anopfuura neakazara uye ega ega kuverenga kwakaringana nguva dzese. Chero nguva iyo Domino ™ painoona bhiri risingafanirwe kupfuura, rakadaro sangano risiri iro kana inofungidzirwa kuti yekunyepera, inomira kuverenga nekukasira uye kukuzivisa iwe nezve mutsauko.
Kolibri Domino inoverenga yega, nekumhanya kwe1,200 mabhiri paminiti, yakasanganiswa murwi wemabhiri, inoaronga zvichienderana nesangano, uye inopa kukosha kwese kuverengerwa - kusiyana nemamwe mabhiri akaverengeka asingakwanise kuona dhinominesheni uye kukosha. Iyo yakanyatso fungwa dhizaini uye yemhando yepamusoro yakavakirwa-mukati zvikamu zvinopa inoshanda uye yakatsetseka kuverenga kwemarudzi ese emabhiri matsva uye akasakara.
Multiple modes uye mabasa kune ese ako bhizinesi 'mari yekuverenga zvinodiwa: Sanganisa, Ronga, VSort, Auto / Manual, Wedzera, Batch, Wedzera uye Batch. Ese maficha aya ndeekupa runyararo rwepfungwa kurerutsa akaomesesa uye anotora nguva ekuverenga maitirwo emari uku kurongeka kuchipihwa.
Inotsigira ese maNorth America mari USD, CAD, MXN. Yakagadzirwa uye yakagadzirwa muUS neKolibri Nyanzvi mune zvekushandisa mari yekushandisa.
Iyo Kolibri Domino inyanzvi yegiredhi muchina unochengetedza bhizinesi kubva kumanyepo. Ne 100% kunyatsojeka inoongorora zvine hungwaru manotsi kuti ichokwadi, ichipa yakanyanya kuchengetedzeka uchishandisa innovative 2CIS, ultraviolet, infrared, magnetic, sensors pamwe ne, hafu, cheni mbiri mabhiri ekuona uye serial nhamba yekuzivikanwa.
Interface yakagadzirirwa kunyatso fambisa ine hombe TFT kuratidza iyo inopa yakadzama pa-screen mushumo inogona kudhindwa uye kuchengetwa rekodhi (printer haina kubatanidzwa). Chirevo chedata chine huwandu hwese, kurambwa kwese uye huwandu hwese hwejamu huripo zvakare paKolibri Domino.
Yakaverengerwa kubva ku6 ongororo yevatengi.
Ronga wongororo: Most zvichangobva Vakuru vakuru Akakwirisa masero Yakaderera ratings Inonyanya kubatsira